ပေါ့ဘာစာချုပ်ကိစ္စ အာဆင်နယ်ဆီက သင်ခန်းစာယူရမယ့် ယူနိုက်တက် – FBV SPORT NEWS
လက်ရှိနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေမှာ ထိပ်တန်းရောက်နေတာကတော့ပေါ့ဘာဟာယူနိက်တက်မှာဆက်ရှိမှာလား မရှိဘူးလား? ယူနိက်တက်ဘက်က ပေါ့ဘာကို ထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာလား? လစာများစွာတိုးပေးပြီး စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးစားသွားမှာလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်အခြေအနေမှာ ပေါ့ဘာအေးဂျင့်ရွိင်းအိုလာက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပီအက်စ်ဂျီဥက္ကဌနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ ယူနိက်တက်ဘက်က ပေါ့ဘာကို ပရီးမီးယားလိဂ် စံချိန်တင်လစာ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ တစ်ပတ်လုပ်ခလစာပေါင် ၄သိန်းထိပေးပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ဘာအသင်းမှာဆက်ရှိရေး မရှိရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုတွေရှိပေမယ့် ပေါ့ဘာရဲ့ ယူနိက်တက်အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းက ဆိုပါတယ်။
ပေါ့ဘာဟာ ဂျူဗင်ကနေ ပေါင်သန်း၉၀နီးပါးနဲ့ရောက်လာပြီး ယူနိက်တက်မှာရှိနေတဲ့ ၅နစ်အတွင်း ဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်မှုတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာပေါ့ဘာဟာ ယူနိက်တက်က ပေါ့ဘာလားလို့မေးရလောက်အောင် ကောင်းလွန်းပေမယ့် ယူနိက်တက်မှာတော့ ခြေစွမ်းမမှန်ပဲ အကောင်းဆုံးပုံစံကို မြင်တွေ့ရဖို့ခက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာ ပွဲထွက်ခွင့်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့တာကြောင့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်က မပျော်ဘူးလို့ပြောထားပြီး ခြေစွမ်းမမှန်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် ပေါ့ဘာကို စံချိန်တင်လစာ ၄သိန်းထိပေးပြီး စာချုပ်သစ်ချုပ်တာဖြစ်သင့်ရဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိလာပါတယ်။
ပေါ့ဘာဟာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ သူ့အနေနဲ့ ယူနိက်တက်မှာထက်ကစားခွင့်လွတ်လပ်မှုတွေပိုရတယ်လို့ပြောထားဖူးပါတယ်။ဒါဟာလည်းတစ်ကယ့်ကိုအမှန်တစ်ရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ကန်တေဟာ ကွင်းလယ်ကို ကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်ရုံမက နောက်တန်းထိပါပိုင်နိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် ပေါ့ဘာဟာပြင်သစ်အသင်းမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်တာလည်းပါပါတယ်။
ဒါဆို မန်ယူအသင်းမှာဘရူနိုရှိတာပဲလို့ပြောစရာရှိပေမယ့် ပေါ့ဘာလိုနေတာဟာ ကန်တေလိုကွင်းလယ်ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ ပေါ့ဘာခြေစွမ်းဟာယူနိက်တက်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံလုံးဝမရှိဘူးလို့ညနေခင်းသတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကရေးသားထားပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ယူနိက်တက်တို့ဟာဆန်ချိုနဲ့တင် အချိန်ကုန်နေတာမို့ ကွင်းလယ်ပိုင်းကို အားဖြည့်ဖို့ ဘာမှမယ်မယ်ရရလုပ်ဆောင်ချက်တွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီကလန်ရိုက် ဂရေးလစ်စတဲ့ကစားသမားတွေကိုချိတ်ဆက်မှုတွေတော့ရှိထားပြီး ပေါ့ဘာကိုသာစံချိန်တင်လစာနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုကစားသမားတစ်ဦးတော့ယူနိက်တက်အနေနဲ့လိုလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
ဒီတော့မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အနေနဲ့ ပေါ့ဘာကို လွတ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်ပေးသင့်သလား? အသင်းမှာဆက်ရှိနေရင်ပြီးရော စံချိန်တင်လစာနဲ့စာချုပ်ချုပ်မလားစဉ်းစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ယူနိက်တက်ရဲ့လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်ရပ်ကို မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းစာကတော့ အာဆင်နယ်အမှားကို သင်ခန်းစာယူရမယ်လို့ မန်ယူကိုသတိပေးရေးသားလိုက်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ မီဆွတ်အိုဇေးကို စံချိန်တင်လစာကြီးပေးထားပြီး အသင်းရဲ့ကစားကွက်နဲ့အံ့မဝင်တဲ့အတွက် အသုံးမပြုပဲ အရံခုံမှာသာထားခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်းပေါ့ဘာဖြစ်ရပ်မှာ ပေါ့ဘာကိုယ်တိုင်က ဂျူဗင်နဲ့ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ကစားကွက်တွေ နည်းစနစ်ပိုင်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ယူနိက်တက်မှာထက် သူ့ကိုသူပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီး အသင်းနဲ့အံ့မဝင်တဲ့သူ့အခြေအနေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြောပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။
အိုဇေးဟာ အရံခုံမှာအချိန်ကုန်ရင်း ကောင်းမွန်လှတဲ့ သူ့အရည်အချင်းတွေဟာ ပျက်စီးခဲ့ရပြီး အသင်းကလည်းသူ့ကိုပေးချေရတဲ့လစာဟာ အလွန်နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ အသင်းလည်းနစ်နာ အိုဇေးလည်းနစ်နာဖြစ်ခဲ့ရပြီး ကစားသမားဘဝဟာ အနိမ့်ပိုင်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယူနိက်တက်အနေနဲ့ အိုဇေးနဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ကို သင်ခန်းစာယူတတ်မယ်ဆို ပေါ့ဘာကို အသင်းမှာစံချိန်တင်လစာကြီးပေးပြီးဆက်ထားဖို့ထက် ပေါ့ဘာကိုရောင်းထုတ်ပြီး ကွင်းလယ်အင်အားကို ထပ်မံဖြည့်တင်းတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မန်ချက်စတာညေနခင်းသတင်းကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ဆိုထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယူနိက်တက်အနေနဲ့ အာဆင်နယ်လို အမှားမျိုး ထပ်မံမကျူးလွန်မိဖို့နဲ့ ဒီနှစ်နွေမှာ ကွင်းလယ်တင်မကပဲ နောက်တန်းထိ အားဖြည့်နိုင်တဲ့ ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ကို‌ခေါ်ယူသင့်တယ်လိုသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ ဒိတော့ မန်ဖန်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ ပေါ့ဘာကို လွတ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်ပေးသင့်သလား? ဈေးကြီးပေးပြီး အသင်းမှာအကောင်းဆုံးပုံစံမပြနိုင်ရင် အရံခုံထိုင်ရမယ့် အိုဇေးလိုအဖြစ်နဲ့ကြုံမယ်ထင်လား? မိတ်ဆွေတို့အမြင်ကိုလွတ်လပ်စွာကွန်မန့်မှာမျှဝေလို့ရပါတယ်..